Maazị Tian na ndị otu ya na-elekwasị anya na inye ndị ahịa azụmaahịa ma ọ bụ China si n'akụkụ ụwa niile ọrụ ndị metụtara iwu si mba ọzọ.
A na-ekewa ọrụ anyị n'ụzọ abụọ dabere na ụdị ndị ahịa: ọrụ maka ndị ahịa ụlọ ọrụ, yana ọrụ maka ndị mmadụ n'otu n'otu, gụnyere ndị si mba ọzọ nọ na China, ọkachasị na Shanghai.
Maka ndị ahịa / azụmahịa
Dịka otu egwuregwu pere mpe, anyị anaghị etu ọnụ maka ọrụ zuru oke, nke ọrụ iwu zuru oke, kama, anyị chọrọ ịkọwapụta uche anyị na ike anyị ebe anyị nwere ike ime karịa ndị ọzọ.
1. Ofesi Direct Investment na China
Anyị na-enyere ndị na-etinye ego na mba ofesi aka ka ha nwee azụmaahịa mbụ ha na China site na ịtọlite ​​ụlọ ọrụ azụmahịa ha na China, gụnyere ụlọ ọrụ nnọchite anya, ngalaba azụmaahịa, njikọta njikọ mba ofesi na mba ọzọ (JV ziri ezi ma ọ bụ nkwekọrịta JV), WFOE (ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ nwere), mmekọrịta , ego.
Na mgbakwunye, anyị na-eme M&A, na-enyere ndị na-etinye ego si mba ọzọ aka inweta ụlọ ọrụ ụlọ, ụlọ ọrụ, na akụ arụmọrụ.
2. Iwu ala na ụlọ
Nke a bụ otu n'ime usoro omume anyị nke anyị mepụtara ma chịkọta ahụmịhe na nnwale bara ụba. Anyị na-enyere ndị ahịa aka:
(1) isonye n’usoro ikwe ọhaneze maka ire ala iji nweta ezi ala maka mmepe ala ma ọ bụ ebumnuche ụlọ ọrụ dịka ụlọ nrụpụta ụlọ, ụlọ nkwakọba ihe wdg;
(2) ịgagharị site na iwu na ụkpụrụ dị arọ na adịghị ike metụtara mmepe ụlọ, ụlọ obibi ma ọ bụ nke azụmaahịa, ọkachasị mpaghara ime obodo na iwu ụlọ;
(3) inweta na ịzụta ihe ndị dị ugbu a, ụlọ ndị dị ka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ọfịs na azụmaahịa, gụnyere ịme nyocha nyocha siri ike na njirimara ndị dị na ajụjụ, usoro azụmahịa, ụtụ isi na njikwa ihe onwunwe;
(4) ego oru ngo ụlọ, ego ụlọ akụ, ntụkwasị obi ego;
(5) itinye ego n’ime ala nke China, na-acho uzo n’aha ndi ozo si na emegharia ya, megharia ya ma rekwaa ya.
(6) ezigbo ụlọ / mgbazinye ụlọ, ịgbazite ụlọ, ọfịs na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
3. General Corporate Iwu
Banyere ọrụ ụlọ ọrụ iwu ụlọ ọrụ izugbe, ọtụtụ mgbe anyị na-abanye nkwekọrịta nkwekọrịta kwa afọ ma ọ bụ kwa afọ na ndị ahịa nke anyị na-enye ihe dị iche iche nke ọrụ ndụmọdụ gbasara iwu, gụnyere mana ọnweghị oke:
(1) mgbanwe ụlọ ọrụ izugbe na azụmaahịa azụmahịa, adreesị ụlọ ọrụ, aha ụlọ ọrụ, isi obodo edebanyere aha, mmalite nke ngalaba azụmahịa;
(2) na-adụ ọdụ na ọchịchị ụlọ ọrụ, idepụta iwu nke na-achịkwa ọrụ nke nzukọ ndị na-ekenye ndị ọzọ, nzukọ ndị isi, onye nnọchi anya iwu na onye isi njikwa, iwu na-achịkwa iji akara / iriba ụlọ ọrụ, yana iwu gbasara ihe mkpali na njikwa;
(3) inye ndụmọdụ gbasara ọrụ na nsogbu nke ndị ahịa, na-enyocha nkwekọrịta ọrụ na iwu nke ndị ọrụ na ọkwa dị iche iche, ịdepụta akwụkwọ ntuziaka ndị ọrụ, ịchụpụ ndị mmadụ n’ike, na mkpezi ọrụ na ịgba akwụkwọ;
(4) na-adụ ọdụ, na-edepụta, na-eleba anya, na-emeziwanye ụdị azụmaahịa azụmaahịa niile eji arụ ọrụ azụmaahịa ya na ndị ọzọ;
(5) na-adụ ọdụ n'okwu gbasara ụtụ isi gbasara azụmaahịa ndị ahịa.
(6) inye ndụmọdụ gbasara iwu gbasara atụmatụ mmepe nke ndị ahịa na mba China;
(7) inye ndụmọdụ gbasara iwu n’ihe metụtara ikike ọgụgụ isi, tinyere ngwa maka, ịnyefe na ikike nke patent, ụghalaahịa, nwebisiinka na ndị ọzọ;
(8) iweghachi nnata nke enwere ike site na izipu akwụkwọ ozi gbasara ndị ahịa;
(9) ideputa, na-enyocha nkwekọrịta ụlọ ịgbazite ma ọ bụ ire ọrịre nke akụrụngwa mgbazinye ma ọ bụ nwe nke ndị ahịa maka ọfịs ha ma ọ bụ ụlọ ọrụ ha;
(10) imeso ndị ahịa ahịa ihe ị na-ekwu na-enweghị ihu ọma, yana inye ndụmọdụ dị mkpa banyere ya;
(11) ichikota na idozi esemokwu n’etiti ndi ahia na ndi ochichi;
(12) na-enye usoro iwu gbasara iwu na ụkpụrụ PRC gbasara arụmọrụ azụmaahịa ndị ahịa; ma na-enyere ndị ọrụ ya aka ịghọta nke ọma otu ihe ahụ;
(13) isonye na mkparita uka n’etiti onye ahia na ndi ozo obula n’ime ihe banyere njikota, nnweta, nmekorita, imeghari, mmekorita ahia, inyefe ihe ndi ozo na ego, enweghi ego na mmiri;
(14) na-eme nyocha nyocha nke ọma na ndị ahịa azụmaahịa nke ndị ahịa site na ịchọta ndekọ ụlọ ọrụ nke ndị mmekọ dị otú a na-echekwa na ụlọ ọrụ mpaghara na ụlọ ọrụ azụmahịa;
(15) inye oru iwu na / ma obu sonye na mkparita uka banyere esemokwu na esemokwu;
(16) na-enye ndi oru nlere anya na nkuzi ha banyere iwu PRC nye ndi oru na ndi oru ha.
4. Ikpezi ikpe na ịgba akwụkwọ
Anyị na-enyere ndị ahịa ụwa aka ịkpezi ikpe na ịgba akwụkwọ na China n'ịchụso, ichebe na ichebe ọdịmma ha na China. Anyị na-anọchite anya ndị ahịa ụwa niile na esemokwu niile dị n'okpuru ikike ụlọ ikpe ndị China, dị ka esemokwu njikọta, ụghalaahịa, ọrịre na ịzụta mba, nkwekọrịta ọkọnọ, nkwekọrịta ikikere IPR, azụmahịa mba ụwa na esemokwu azụmahịa ndị ọzọ na ndị otu China.
Maka ndi mmadu / ndi ozo / ndi ala ọzọ
N'ebe a, anyị na-enye ọtụtụ ọrụ iwu obodo dị iche iche nke ndị ahịa ọ bụla chọrọ ugboro ugboro.
1. Iwu Ezinụlọ
Enyerela m ọtụtụ ndị ala ọzọ ma ọ bụ ndị mbata na China aka na nsogbu ha na-ebilite n'etiti ndị di na nwunye, ndị ezinụlọ. Ọmụmaatụ:
(1) idebanye nkwekọrịta ha tupu ha alụọ tupu ha alụọ di na nwunye ọhụrụ na ndị na-alụ nwanyị ọhụrụ bụ ndị na-abụkarị ndị nwoke ma ọ bụ ndị nwanyị China, na ịme atụmatụ ezinụlọ ọzọ maka ndụ alụmdi na nwunye n'ọdịnihu;
(2) na-adụ ndị ahịa ọdụ maka ịgba alụkwaghịm ha na China site na ịkọwapụta usoro ịgba alụkwaghịm ha na ichebe ọdịmma ha na ọnọdụ nke ọtụtụ ikike metụtara usoro a na-agbakarị usoro ịgba alụkwaghịm; na-adụ ọdụ maka ikewa, nkewa nke alụm di na nwunye, mpaghara obodo;
(3) inye ndụmọdụ gbasara ikike ụmụaka, nlekọta na nlekọta;
(4) ọrụ ịhazi ezinụlọ dị iche iche n'ihe metụtara akụ ma ọ bụ arịa ezinụlọ na China tupu aghụghọ.
2. Iwu nketa
Anyị na-enyere ndị ahịa aka iketa, site n'ọchịchọ ma ọ bụ site na iwu, ihe nketa ma ọ bụ hapụ ndị ha hụrụ n'anya, ndị ikwu ma ọ bụ ndị enyi. Ala ndị dị otú ahụ nwere ike ịbụ ezigbo ụlọ, nkwụnye ego ụlọ akụ, ụgbọ ala, ọdịmma ego, mbak, ego na ụdị akụ ma ọ bụ ego ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị na-enyere ndị ahịa aka ịchụ ihe nketa ha site na ịga ikpe ụlọ ikpe nke nwere ike ghara ịdị na-emegide ya ma ọ bụrụhaala na ndị ọzọ nwere nkwekọrịta maka ọdịmma ha na ala.
3. Iwu ala na ụlọ
Anyị na-enyere ndị ala ọzọ ma ọ bụ ndị bịara abịa aka ịzụta ma ọ bụ ree ụlọ ha nke China, esp properties dị na Shanghai ebe anyị dabere. Anyị na-adụ ndị ahịa ahụ ọdụ n'ụdị ire ma ọ bụ zụta dị otú ahụ site na inyere ha aka ịbịaru usoro na ọnọdụ azụmahịa na ịhụ na arụmọrụ nke nkwekọrịta azụmahịa.
N'ihe banyere ịzụrụ ụlọ na China, anyị na-enyere ndị ahịa aka ịghọta mmachibido ịzụta ihe ndị a na-amachibidoro ndị ọpụpụ, iji mesoo ndị ọzọ metụtara ya gụnyere ndị ahịa, ndị na-ere ahịa na ụlọ akụ ma na-emeso nsogbu mgbanwe mgbanwe mba ọzọ metụtara usoro ahụ.
N'ihe banyere ire ala na Shanghai, China, ọ bụghị naanị na anyị na-enyere ndị ahịa aka iku nkwekọrịta nkwekọrịta na ndị na-azụ ahịa kamakwa na-enyere ha aka ịgbanwe ahịa ha retara na mgbanwe mba ofesi dịka US dollar na waya otu si China gaa obodo ha.
4. Ọrụ / Iwu Iwu
N'ebe a, anyị na-enyekarị ndị ọbịa na-arụ ọrụ na Shanghai aka ịnagide ndị ọrụ ha na esp n'ihe banyere esemokwu dịka ịchụpụ na-akwụghị ụgwọ na ịkwụ ụgwọ wdg.
N'iburu àgwà ele mmadụ anya n'ihu nke Iwu Na-ahụ Maka Ọrụ na China na iwu ndị ọzọ na-enweghị isi, maka ọtụtụ ndị ọbịa na-anata nnukwu ụgwọ na China, ozugbo esemokwu na ndị were ha n'ọrụ na-arụ, ndị ọrụ na-ahapụkarị ọnọdụ ihere ebe ha ga-ehulata tupu ndị were ha n'ọrụ amata na a naghị echebe ha nke ukwuu n'okpuru iwu ọrụ ndị China ọ bụla. Ya mere, n'ịtụle ihe egwu dị otú a metụtara ọrụ onye ọchụnta ego na China, anyị na-agba ndị ọbịa na-arụ ọrụ na China ka ha na ụlọ ọrụ ha kpọọ okwu iwu iji zere ibubata ọnọdụ siri ike na China.
5. Iwu mmerụ ahụ nkeonwe
Anyị ejirila ọtụtụ nsogbu mmerụ ahụ metụtara ndị ala ọzọ merụrụ ahụ na ihe mberede okporo ụzọ ma ọ bụ ọgụ. Anyị chọrọ ịdọ ndị mba ọzọ nọ na China aka na ntị ka ha kpachara anya maka mmerụ ahụ na China n'ihi na n'okpuru iwu mmerụ ahụ nke ndị China ugbu a, ndị mba ọzọ ga-ahụ ụgwọ a ga-akwụ ha n'ụlọ ikpe ndị China. Otú ọ dị, nke a bụ ihe ọ ga-ewe ogologo oge ịgbanwe.
Onye nnọchi anya ụlọ ọrụ iwu nke China, Divlọ Ọrụ Iwu Alụkwaghịm na China, Familylọ Iwu Iwu Ezinụlọ nke China,